"Ou" (ट्याब्लेट): समीक्षा, मूल्यहरू निर्देशन, फोटो, खेल र सुविधाहरू
रूसी कम्पनी "कहां" मोबाइल इलेक्ट्रनिक्स-गुणस्तर, कार्यात्मक र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सस्तो उपकरणहरू को रूसी बजार आपूर्ति। प्रयोगकर्ता एक किफायती मूल्य मा सभ्य विशेषताहरु भएको निपटान उपकरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। को "कहां" बाट ट्याब्लेट को सबै भन्दा प्रसिद्ध मोडेल को विशिष्टता के हो?
ब्रान्ड बारेमा जानकारी
कम्पनी Explay - डिजिटल प्रविधिको रूस सबैभन्दा ठूलो निर्माता (मुख्य रूप स्मार्टफोनहरू, पाटी, जीपीएस-नेविगेटर, साथै एमपी -3-खेलाडी)। कम्पनी 2003 मा स्थापित भएको थियो, यो मूल सेलुलर फोन, हेडफोन, साथै खेलाडीहरू सामान को आपूर्ति मा विशेष थियो। समय, ब्रान्ड को दायरा विस्तार। Prolife र भोक्सटेल - कम्पनी पनि अन्य दुई व्यापार चिह्न मालिक हो। बेचिएको उत्पादन "कहां" ठूलो खुद्रा चेन र साना रिटेल आउटलेट मा।
GFK को अनुमान अनुसार, 2014 मा Explay ब्रान्ड ट्याब्लेट खण्ड मा रूसी बजार मा बिक्री को मामला मा तेस्रो भएको थियो। कम्पनी को आदरणीय कम्पनी थियो: पहिलो स्थान दोस्रो मा, सूचीबद्ध थियो सैमसंग - एप्पल। र यो 2013 मा ब्रान्ड 6th भयो भन्ने तथ्यलाई बावजुद। सबैभन्दा 2014 मा बेचिएको को "कहां" को निर्णय - ट्याब्लेट Explay ठोकियो, उपकरण Explay आँधी को यस्तै प्रकार, साथै उपकरण Explay D8.2।
के रूसी ब्रान्ड यी उपकरण मोडेल विशेष उल्लेखनीय छ? सबै को पहिलो, तिनीहरू सबै3जी मार्फत इन्टरनेट जडान गर्न सक्ने क्षमता समर्थन भन्ने तथ्यलाई। एकै समयमा यसरी प्रयोगकर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, चाँडै रोमिङ हुँदा लाभदायक छ जो एक अपरेटर, जो मार्फत दैनिक अनलाइन पहुँच, अन्य मा देखि स्विच गर्न,2फरक सिम कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, सोही विकल्प उपयोगी छ भने शहर केही क्षेत्रमा कवरेज विभिन्न विक्रेताहरु फरक गुणस्तर।
का सबै भन्दा अधिक लोकप्रिय, बिक्री तथ्याङ्क अनुसार, 2014 मा, रूसी ब्रान्ड सिक्न उत्पादनहरु गरौं। पत्ता धेरै ट्याब्लेट एउटा तरिका वा अर्को परिमार्जन मा "कहां" कसरी। तर हाम्रो समीक्षा को सबै nuances छ। ग्राहक समीक्षा - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, जो हामी हरेक निर्मित "कहां" ट्याब्लेट रुचि हुनेछ।
Explay ठोकियो: विशेषताहरु र peculiarities
यो यन्त्र बजेट वर्ग पर्छ। यसको मूल विशेषताहरु। ब्रान्ड नाम "कहां अन्तर्गत बेचिएको» हिट मोडेल ट्याब्लेट2कोर संग एक प्रोसेसर र 1.3 GHz को घडी गति छ। संस्करण 4.2 मा उपकरणको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम द्वारा व्यवस्थित। राम को राशि यन्त्र स्थापित, - 512 एमबी। निर्मित स्मृति -4जीबी। त्यहाँ माथि 32 जीबी यस्तो एसडी रूपमा थप मेमोरी कार्ड लागि समर्थन छ। गोली7इन्च को एक विकर्ण र 1024 600 पिक्सेल को एक संकल्प संग एक TFT प्रकार प्रदर्शन छ। स्क्रिन Multitouch प्रविधि समर्थन गर्दछ। 0.3 सांसद -2सांसद को एक संकल्प र अगाडि संग आधारभूत - यो उपकरण दुई Chambers छ। प्रमुख संचार इन्टरफेस devaysa: microUSB, वाइफाइ, ब्लुटुथ, जीपीएस। को प्लेट पनि3जी मार्फत इन्टरनेट पहुँच समर्थन गर्दछ। साथै, उपकरण2सिम-कार्ड सामान्य ढाँचा संग काम गर्न सक्छन्। devaysa ब्याट्री क्षमता - 2800 mAh।
के डिजाइन निर्णय ट्याब्लेट, "कहां" जारी संलग्न? फोटो उपकरण - तल।
हामी यन्त्र रचनात्मक बनेको छ हेर्न, र नै समय पर्याप्त बलियो अवधारणा, जो यो व्यक्तिगत शैली पक्षमा विभिन्न प्राथमिकताहरू संग प्रयोगकर्ताहरूको लागि बहुमुखी बनाउँछ मा।
को समग्र उपकरणको विशेषताहरु प्रतिस्पर्धी हुन। उदाहरणका लागि, जस्तै आधारभूत आवेदन र आजको खेल धेरै रन, enigMap अनलाइन, इन्टरनेट पहुँच - सामान्य मा, तिनीहरूले तपाईंलाई सबैभन्दा उद्देश्य उपकरणहरू यस प्रकारको विशिष्ट लागि ट्याब्लेट प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। दुई क्यामेरा संग उपकरण उपकरण यसको बहुमुखी बढ्छ। त्यसैले, तपाईं बस तस्वीर पनि लाग्न सक्छ, तर Selfie बनाउन र स्काइप मार्फत आराम कुराकानी।
मुख्य सुविधा, जो केही विशेषज्ञहरु, को "Expl" ट्याब्लेटको अनुसार फरक - मूल्यहरु र सुविधाहरू। यो आफ्नो उपकरणहरूमा बजार धन्यवाद सबैभन्दा आकर्षक बीच गणना गर्न सकिन्छ। हामी पूर्णतया पहिल्याउन सक्छ पनि यो मोडेल को एउटा उदाहरण हो।
Explay ठोकियो ट्याब्लेट लायक लगभग4हजार। RUB। एउटै लागत लागि प्रतिस्पर्धी समाधान खोज्न अत्यन्तै कठिन विशेष गरी विदेशी ब्रान्डहरु द्वारा उत्पादित गर्दै छन् कि ती बीचमा छ।
Explay ठोकियो: समीक्षा
द्वारा "कहां" ट्याब्लेट के प्रयोगकर्ता भन्छन्, निर्मित किनेको? ग्राहक समीक्षा सामान्यतया सकारात्मक टोन छन्। विशेष गरी सकारात्मक मूल्यांकन उपकरणको मूल्य र कार्यक्षमता को संयोजन दिइएको। र यो उपकरणको केही विशेषताहरु भद्र लाग्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद - विशेष मा, सफल प्रक्षेपण पछि राम को राशि, ताकि ट्याब्लेट सबै नवीनतम खेल "कहां" स्थापित हुन सक्दैन। तर जब आवेदन संग काम गर्न, धेरै प्रयोगकर्ता द्वारा उल्लेख, महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न।
उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो छ - प्रयोगकर्ता लेख्नुहोस्। छैन साँच्चै आवश्यक, तिनीहरूले भने, यो निर्देशन। हामी अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड 4.2, मोबाइल इलेक्ट्रनिक्स को सबै भन्दा आधुनिक फ्यानहरूसँग परिचित छ कि इन्टरफेस, माथि उल्लेख यस परिमार्जन मा गोली "कहां", नियन्त्रित छ। बटन र टच स्क्रीन - सफ्टवेयर इन्टरफेस उपकरण प्रयोग गरेर को पक्ष मा सान्त्वना यसको हार्डवेयर नियन्त्रण ट्याप गर्नुहोस् सुविधाको द्वारा complemented छ।
Explay आँधी: विशेषताहरु र peculiarities
«कहां» आँधी ट्याब्लेट द्वारा निर्मित पनि प्रयोगकर्ता को एक विस्तृत श्रृंखला फिट। उपकरण सक्रिय अर्को एक क्षेत्र देखि सारियो जुन ठूलो शहर को बासिन्दाहरूलाई लागि सबै भन्दा राम्रो रूपमा अवस्थित छ। ट्याब्लेट बहुमुखी प्रतिभा, कार्यक्षमता, विश्वसनीयता र कम लागत द्वारा विशेषता छ - यो रूसी ब्रान्ड को उत्पादन को एक आवश्यक विशेषता हुन्छ।
उपकरण अघिल्लो मोडेल, दुई Chambers जस्तै सुसज्जित छ। 0.3 सांसद - एक2सांसद, अन्य एक संकल्प मा काम गर्छ। या त एक्लै वा साथीहरूसँग - सामने क्यामेरा लागि भद्र आंकडा तापनि यसलाई स्काइप मार्फत कुराकानी गर्न पर्याप्त, साथै शानदार Selfie छ।
यन्त्र, संकुचित स्टाइलिश र बलियो शरीर द्वारा विशेषता छ, र एक ठूलो ब्याट्री क्षमता जो शुल्क बिना एक दीर्घकालीन प्रयोग implies, पर्याप्त छ। को प्लेट4प्रोसेसर कोर र 1.3 GHz को घडी आवृत्ति माउन्ट छ। चिप ह्यान्डल गर्ने भिडियो devayse लागि जिम्मेवार - माली-400। यी हार्डवेयर घटक दिनु उत्कृष्ट उपकरण प्रदर्शन। यो आधारभूत आवेदन र खेल सञ्चालन गर्न सजिलो हुन सक्छ। प्रदर्शन को लागि जिम्मेवार को घटक को पक्ष मा, आँधी पर्याप्त पनि उच्च मूल्य विभाग को उपकरणहरू विरुद्ध प्रतिस्पर्धी देखिन्छ।
को प्लेट को विशेषताहरु अधिक।
यो उपकरण अघिल्लो मोडेल जस्तै,7इन्च को एक विकर्ण र 1024 600 पिक्सेल को एक संकल्प संग प्रदर्शन, सुसज्जित छ। म्याट्रिक्स स्क्रिन प्रविधि - TFT। प्रदर्शन प्रकार - capacitive, "बहु-स्पर्श" को लागि समर्थन छ। राम ट्याब्लेट - 1 जीबी, कि अघिल्लो मोडेल भन्दा दुई पटक बढि छ। त्यस्तै - फ्लैश स्मृति मा: यो उपकरण यसको मात्रा - 8 जीबी। यो 32 जीबी थप मोड्युलहरू अप स्थापना गर्न, microSD सम्भव छ। Devaysa आधारभूत संचार इन्टरफेस: संस्करण4मा वाइफाइ, ब्लुटुथ। बस मोडेल ठोकियो रूपमा, यन्त्र अनलाइन3जी-माध्यमबाट जान सक्नुहुन्छ साथै मोबाइल फोन मोडमा कार्य गर्न। तपाईं एकै समयमा2सिम कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक जीपीएस र एक जीपीएस समर्थन छ। उपकरण एक गति संग सुसज्जित छ।
के विशेष उल्लेखनीय ट्याब्लेटको "कहां" छ? मूल्यहरु र प्रतिस्पर्धा समाधान संग प्रत्यक्ष तुलना मा रूसी ब्रान्ड को उत्पादनहरु को विशेषताहरु आफु को लागि कुरा। तूफान उपकरण हिट भन्दा एक बिट अधिक महंगा छ -5हजार rubles .. तर, अपेक्षाकृत सानो overpayment प्रयोगकर्ता दुई पटक धेरै राम, फ्लैश स्मृति र अनुकूल प्रोसेसर कोर को आदर मा "कारक" को रूपमा हुन्छ।
Explay आँधी: समीक्षा
कसरी उत्पादन को प्रयोगकर्ता प्रश्न "कहां" मा चिनारी गर्न? गोली समीक्षा जो साधारण विषयगत पोर्टल को एक ठूलो संख्यामा, अत्यन्तै सकारात्मक विशेषता द्वारा। यो यसको क्षमता गर्न धेरै हदसम्म कारण छ। यस मामला मा, यन्त्र राम को 1 जीबी संग सुसज्जित छ, र यो ट्याब्लेट को मालिक को अनुसार, सुरूवात खेल र अनुप्रयोगहरूको पक्षमा महत्वपूर्ण अवसर implies। यो तिनीहरूलाई अनुसार,4कोर संग एक उच्च-प्रदर्शन प्रोसेसर पनि छ, facilitated छ।
को आत्मपुरक तत्व - डिजाइन, व्यवस्थापन सुविधा, रंग - ट्याब्लेट पनि सकारात्मक टोन मा विशेषता छ। सदस्यहरूले बाडे विधानसभा गुणस्तर, उच्च स्तर यसलाई डिजाइन साथै समाधान संलग्नता devaysa कार्य सजिलो प्रयोग जोड।
Explay डी 8.23जी: विशेषताहरु र peculiarities
यो ट्याब्लेट पनि यो दुई अघिल्लो मोडेल भन्दा अधिक महंगा छ तापनि, बजेट को कोटीमा राम्रो श्रेय हुन सक्छ। अब यसको मूल्य - बारे 6900 rubles। को "कहां" बाट आधारभूत प्राविधिक सुविधाहरू लोकप्रिय ट्याब्लेटको एक विचार गर्नुहोस्। उपकरण दुई कोर र 1.2 GHz एक प्रोसेसर संग सुसज्जित छ। राम - 512 एमबी। उपकरण जो 32 जीबी थप कार्डहरू प्रयोग गरेर वृद्धि गर्न सकिन्छ फ्लैश स्मृति 8 जीबी, छ। प्राथमिक संकल्प2सांसद र अगाडि - - 0.3 सांसद को प्लेट अघिल्लो मोडेल, दुई Chambers जस्तै सुसज्जित छ।
त्यस्तै एक ठोकियो र आँधी को मामला मा रूपमा, यन्त्र3जी-माध्यमबाट अनलाइन जान सक्नुहुन्छ। पछाडि - ग्याजेट बाडे प्लास्टिक सामाग्री बनेको छ, यो पनि धातु तत्व समावेश गर्दछ। उपकरण एक विशिष्ट सुविधा - क्षमता ब्याट्री, आफ्नो जीवन - 4,200 mAh। ठूलो स्क्रिन - मोडेलहरू देखि सबै भन्दा ठूलो भिन्नता आँधी हिट र devaysa। यसको विकर्ण - 8 इन्च र संकल्प - 1024 768 पिक्सेल। विनिर्माण म्याट्रिक्स प्रदर्शन प्रविधि - TFT आईपीएस, टच स्क्रीन प्रकार - capacitive।
Explay डी 8.23जी: समीक्षा
को "कहां" यो उपकरणमा विचार के हो? ट्याबलेट, अनलाइन स्टोर र पोर्टल, मोबाइल इलेक्ट्रनिक्स उत्साही को पृष्ठ मा एक विस्तृत श्रृंखला मा प्रस्तुत छ समीक्षा जो, विशेषता यो यसको खण्ड मा प्रतिस्पर्धी छ रूपमा। यो पक्कै पनि छैन भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर र राम को सबै भन्दा ठूलो रकम हो, प्रयोगकर्ताहरूले भन्छन्। तर यो यन्त्र, को वृद्धि स्क्रिन र सन्तुलित काम उपकरणको मालिक विश्वास छ, पूर्ण क्षतिपूर्ति दिइएको छ। को अपेक्षाकृत शालीन प्रदर्शन बावजुद, ट्याब्लेट लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू र खेल को सुरूवात संग copes। साथै, धेरै मालिक यसको ब्याट्री जीवन को लम्बाइ प्रभावित devaysa। सबै भन्दा ठूलो छैन - जो कारण ट्याब्लेट capacious ब्याट्री स्थापित छ, र प्रसंस्करण शक्ति धेरै तथ्यको शायद छ।
के प्रयोगकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ?
धेरै प्रयोगकर्ताका लागि अझै महत्वपूर्ण उनको प्रदर्शन भन्दा लामो ब्याट्री जीवन उपकरणहरू। यो स्पष्ट छ कि आधुनिक, "फलाम" खेल बजेट मूल्य दायरामा ट्याब्लेटको लागि डिजाइन गरिएको छैन गर्न माग - यो अग्रणी ब्रान्डहरु उत्पादन गर्न आउँछ हुँदा पनि।
त्यसैले, धेरै प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो उपकरण कि साकार गर्दै छन् - यो मुख्य इन्टरनेट, फोटोग्राफी पहुँच गर्न उपकरण छ, चलाउन उपयोगी आवेदन छैन उपकरणको घटक को उपकरण धेरै ध्यान गर्छन्, आफ्नो गति र उत्पादन प्रदर्शन माग चलाउन क्षमता निर्धारण गर्छ।
बजार मा एक शक्तिशाली खेलाडी
यो उत्पादन मा जानकारी अध्ययन गरेपछि लोकप्रिय ट्याब्लेट "कहां", सुप को समीक्षा र मूल्यहरू, हामी रूसी मोबाइल इलेक्ट्रनिक्स बजार उत्कृष्ट गुणस्तर उपकरण संग आफ्नो ग्राहकहरु आपूर्ति, एक शक्तिशाली खेलाडी गठन गरेको छ कि निष्कर्षमा आउन सक्छ। त्यो सिद्धान्त मा 2014 मा बिक्री तथ्याङ्क को, प्रमाण। एक साधारण मानक जो धेरै प्रयोगकर्ताहरू चयन ट्याब्लेट "कहां" - मूल्य। केही विशेषताहरु संग संयोजन मा हामीलाई बजार मा सबै भन्दा प्रतिस्पर्धी को सुप हेरिएको राख्छ। तथापि, रूसी ट्याब्लेटको ब्रान्ड को कार्यक्षमता र प्रदर्शन को मामला मा धेरै राम्रो छ।
ग्राफिक्स कार्ड छ nvidia GeForce 8600 GT: सुविधा र विवरण
यसलाई आफ्नो कम्प्युटर मा मेमोरी असर
बजार र ग्राहक समीक्षा एक समीक्षा: एक वायरलेस-aural कसरी चयन गर्न
अवलोकन HP Scanjet 200 स्कैनर
मनिटर को विभिन्न प्रकार के हुन्?
कार द्वारा विदेश यात्रा
Olga Boldyreva: रचनात्मकता
थाईल्याण्ड को राम9राजा: जन्मदिन, जीवनी, परिवार फोटो
फिल्म "एक दिन 20 वर्ष पछि": अभिनेता वास्तविक कथा प्ले
सुधार को लागि पट्टी बेरिएको। विरोधी सेल्युलाईट शरीर घरमा wraps - व्यञ्जनहरु
अजोभ सागरको तटमा जेनिचेसक - बाकीको यात्रा
वृद्धि दबाव? के म मदत गर्न सक्नुहुन्छ?
Ecumene - यो फैशन छ। भूगोल र साहित्य मा "Reclaimed भूमि"
मानिस, जैविक र sociocultural विकास को फलस्वरूप। मानव मूल को सिद्धान्त
फर्सी सूप "Belonika": कसरी तयार गर्न र प्रयोग के हो?
एक बिस्तर मा एक डेजी, बोट जस्तै फूल के हो?
Townspeople - मध्ययुगीन शहरहरूमा व्यापार को इन्जिन